Hoggaanka Al Shabaab oo Arrin muhiim ah war kasoo saari doona [dhageyso].
Wednesday April 18, 2018 - 11:02:37 in Wararka by Super Admin
Max'med Cabdi Waare oo ah hoggaamiyaha maamulka isku magacaabay Shirshabelle ee xaruntiisu tahay magaalada Jowhar ee gobolka Sh/dhexe ayaa ku goodiyay in Xarakada Al Shabaab uu ka saari doonno dhammaan deegaannada ay kaga suganyihiin labadaasi g
Max'med Cabdi Waare oo ah hoggaamiyaha maamulka isku magacaabay Shirshabelle ee xaruntiisu tahay magaalada Jowhar ee gobolka Sh/dhexe ayaa ku goodiyay in Xarakada Al Shabaab uu ka saari doonno dhammaan deegaannada ay kaga suganyihiin labadaasi gobol.
Waare oo siyaasiyiin iyo Odayaal dhaqameedyo kula hadlayay magaalada Beled Weyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa Ballan qaaday in inta lagu guda jiro Bisha Shacbaan ay iyaga iyo Al Shabaab ku kala bixi doonaan labada gobolka ee Sh/dhexe iyo Hiiraan.
"Al Shabaab iyo Annaga dhulku Namawada Deeqo inta aan Bisha Ramadaan lagaarin ayaan ka saareynaa Deegaanada Hirshabelle, waad ogtihiin wajigii 1-aad ee howlgallada si fiican ayay kusoo dhammaadeen dhawaanna waxaa bilaaban doono wajiga 2-aad" ayuu yiri Waare.
Waxaan la ogeyn sida uu u rumoobi doono ballanqaadka kasoo yeeray madaxweynaha maamulka isku magacaabay HirShabelle iyadoo la ogyahay in inta badan degmooyinka iyo deegaannada labadaasi gobol ay maamusho Xarakada Al Shabaab.
Ciidamo Itoobiyaan iyo Jabuutiyaan ah ayaa mas'uuliyiinta maamulka Max'med Cabdi Waare madaxda ka yahay ku ilaaliya magaalooyin hooban maamulkaasina malahan ciidamo ubabac dhigi kara Shabaabul Mujaahidiin.
Dhammaan Hoggaamiyaasha maamullada dabadhilifyada ah ee kajira dalka Soomaaliya ayaa bishiiba mar sidaan oo kale ugu hadaaqaan in maamullada islaamiga ah ay ka saarayaan magaalooyin dhaca Koonfurta iyo bartamaha dalka.